Ndriandahy Mahamoudou : “Mila jerena ny kandidà tsy hangalatra…” | NewsMada
Ndriandahy Mahamoudou : “Mila jerena ny kandidà tsy hangalatra…”
“Miezaka izahay hijery hoe: fomba ahoana no hahazoana manana kandidà ho filoham-pirenena mendrika. Hatramin’izay eto amintsika, lasa kandidà nefa olona hangalatra fotsiny raha tenenina amin’ny fomba mivantana.”
Io ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionalin’ny firaisamonina sivily Voifiraisana/PFNOSCM, Ndriandahy Mahamoudou, teny Analakely, momba ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena, taona 2018.
Ahoana no hahazoana kandidà mendrika? Hijery sy hiaro marina ny tombontsoan’ny firenena malagasy sy ny vahoaka izany. Tsy izay tsy mieritreritra hampandroso firenena izany, fa ny tombontsoany manokana fotsiny.
Mila tena arahi-maso ny fifadianana
Ny fanaraha-maso ny fifidianana manerana an’i Madagasikara, ahazoana milaza hoe: mifanipaka tanteraka amin’ny vokatra avoakan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC), ohatra, ny vokatra avoakan’ny fanjakana, araka ny fanazavany.
Izay, farafaharatsiny, ahazoana mifehy sy mametra ny fahavoazana amin’ny alalan’ny fanaraha-maso. Izay no ezaka ataonay. Raha avelantsika malalaka io, anarany fotsiny ny hoe fifidianana fa efa fantatra mialoha ny vokatra.
Ao anatin’ny fahasahiranana tanteraka ny ankamaroan’ny vahoaka malagasy, manjaka ny tsy fandriampahalemana… Izay ny zava-misy. Ao ny milaza hoe andao hahemotra ny fifidianana. Anjaran’ny fanjakana ny mifehy izay tontolo manodidina izay, anjaran’ny olom-pirenena ny mandray ny andraikitra tandrify azy, ary anjaran’ny mpanao politika ny manaja ny fifandimbiasan-toerana demokratika araka ny lalàmpanorenana. Satria tombontsoan’ny firenena no ao ambadik’izay sy ny vahoaka 25 tapitrisa.
Une réponse à "Ndriandahy Mahamoudou : “Mila jerena ny kandidà tsy hangalatra…”"
Malagasy Vonona 31/08/2017 à 10:37
Mba mila valiny haigana dia haingana amin’ny fanehoanao hevitra momba ny ho filoham-pirenana vanona Tompoko.
Izaho manokana dia manohana zato isan-jatony ny hevitrao.
Ny mba hiriko dia :
1/ Omenao ny “critères” hentitra tokony hananan’izay ho fidiana filoha mendrika.
2/ Tokony ho faritana koa ny “programme” tsy maintsy efaina ao anatin’ny fotoana fohy : Iray ka hatramin’ny telo taona.
3/ Tsy maintsy miova ny “Constitution” ka avoitra tsara ao anatin’ny constitution vaovao ny tsy maintsy hametrahana sy hanarahana ny “Etat de droit”.
4/ Apetraka ao anaty “Constituion” koa ireto fepetra ireto :
a/ Tsy misy olona na vondron’olona ambon’ny lalàna : Foanana tanteraka izany ny hoe “Tribunal spécial” rehetra, fa mitovy daholo eo anatrehan’ny Lalàna na iza na iza.
b/ Ferana sy ampahafantarina ny karama sy ny avantage rehetra ho an’ny mpitondra sy ny olom-boafidy ary ny olom-poatendry rehetra.
c/ Tsy mahazo manao asa roa hafa ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry rehetra mandra-pahatapitry ny mandats-ny.
d/ Tsy maintsy manao déclaration de patrimoine ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry rehetra, ary “vérifier”‘na ny fahamarinann’izany. Atao koa ny “vérification de patrimoine” rehefa tapitra ny mandats-n’izy ireo.
e/ Sazy enjana toy ny “asa an-terivozona tsy latsaky ny 30 taona” ny miandry ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry tratra manao “corruption” amin’ny endriny rehetra.
Fehiny Tompoko : Miandrandra olona toa anao ity firenena mahantra anstika ity mba hiarina.